Miisaaniyadda taariikhiga ah waxay dardar gelineysaa maalgashiga ka caawinta ganacsiyada, qoysaska iyo dawladaha hoose inay dib u soo kabtaan oo ay koraan - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Miisaaniyadda taariikhiga ah waxay soo dadajineysaa maalgashiyada lagu caawinayo ganacsiyada, qoysaska iyo dowladaha hoose inay dib u soo kabtaan oo ay koraan
Sidaad u badan tahay inaad hadda ka warqabto, miisaaniyadda sanadlaha ee sanadka 2021-23 waxay sameysaa maalgashiyo taariikhi ah dib-u-soo-kabashada Washington iyo raadadka koritaanka ee ka soo baxa aafada. Dhanka Ganacsiga, waxaan isku diyaarinaynaa shaqo muhiim ah oo naga horaysa madaama aan hirgalineyno $ 2.7 bilyan oo miisaaniyadeed iyo $ 2.4 bilyan oo maalgalin raasumaal ah. Kooxdayadu way sii kordheysaa - waxaan qoreynaa xubno kooxeedyo gaar ah, sidaa darteed waxaan kugu martiqaadayaa inaad hubiso oo aad la wadaagto jagooyinka hadda la dhajiyay oo aad u fiirsato wax badan halkan maaddaama aan xoojineyno awooddeena, gaar ahaan xagga sinnaanta iyo ka mid noqoshada, iyo horumarinta dhaqaalaha iyo gaarsiinta bulshada. Sida had iyo jeer ah, Ganacsigu si wanaagsan ayuu u qalabeyn doonaa si uu wax uga qabto caqabadaha waaweyn ee horyaala, waxaana ku faraxsanahay in naloo xil saaro barnaamijyo badan oo muhiim ah oo xoojinaya bulshooyinka gobolka oo dhan labada sano ee soo socota iyo wixii ka dambeeya. Waa kuwan qaar ka mid ah waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay kal-fadhigii 2021 iyo miisaaniyadda.
Xayeysiis: Maaddaama iskuulada iyo jaaliyaduhu ay ku dhibtoonayeen inay furnaadaan iyada oo loo marayo xaddidaadaha ku saabsan isu-imaatinka jir ahaaneed, nusqaamaha helitaanka helitaanka la heli karo, helitaanka internetka oo tayo sare leh ayaa si xanuun leh ugu muuqday qof walba. Ku Xafiiska Broadband Washington oo la bilaabay deyrtii 2019 iyada oo la socota laba shaqaale waqti-buuxa ah oo aan lahayn maalgelin u gaar ah, oo horseeday dadaal aan caadi ahayn iyo wadashaqeyn lala yeesho guddiyada gobolka, hay'adaha, hay'adaha maxalliga ah, kuwa federaaliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay si loo sameeyo khariidad iyo meeleeyo bulshooyinka Washington si loogu helo marin ballaadhan guud 2024. Hadda, Sharci-dejintu waxay bixisay $ 400 milyan oo maalgelin ah kaabayaasha dhaqaalaha, taas oo, lagu daray maalgelinta ballaadhinta ee ay maamusho Guddiga Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada (CERB) iyo Guddiga Howlaha Guud, ayaa isku xiri doonta oo buuxin doonta farqiga adeegga ballaadhinta ee meelaha miyiga ah ee aan la adeegsan iyo bulshooyinka aan adeegga lahayn iyo ka faa'iideysiga lacagaha federaalka ee dheeri ah. Degmooyinka adeegyada bulshada iyo qaybaha kale ee dawlada hoose ayaa awood loo siin doonaa inay siiso adeeg tafaariiq toos ah macaamiisha iyadoo lagu mahadinayo marinka SB 5383 iyo HB 1336. Ganacsigu wuxuu sidoo kale bilaabi doonaa barnaamij sinaan dhijitaal ah si loo hubiyo in halka ay kaabayaasha ka jiraan, bulshada sidoo kale ay helaan marin macno leh qalabka, diiwaangelinta iyo xirfadaha dhijitaalka ah.
Guri iyo hoy la'aan: Maalgashiyo aan horay loo arag ayaa dadka ka caawin doona inay ka fogaadaan ka saarista iyo inay bixiyaan kirada, oo ay ku jiraan $ 658 milyan oo doolar kirada iyo kordhinta khidmadaha duubista dukumintiga, taas oo uquudi doonta dakhli waara muddo kadib si wax looga qabto hoy la'aanta loona abuuro guryo taageero joogto ah. Ganacsiga Sanduuqa Amaanada Guryaha waxay maamuli doontaa in ka badan $ 175 milyan guryaha la awoodi karo, oo ay ku jiraan $ 125 milyan oo maalgelin tartan ah, iyo $ 120 milyan oo dheeri ah ayaa la siin doonaa dawladaha hoose iyo kuwa aan macaash doonka ahayn si ay u taageeraan deg deg degsiimada guryaha si looga dhigo guryo badan oo la heli karo halka ay aadka ugu baahan yihiin. In ka badan $ 190 milyan ayaa la bixiyey si looga caawiyo milkiileyaasha guryaha inay guryahooda ilaashadaan oo ay ka fogaadaan la wareegidda guryaha. Milkiilayaasha guryaha yar yar iyo kireystayaasha labadaba waxay awoodi doonaan inay marin u helaan $ 80 milyan oo dheeraad ah oo ah kaalmada korantada Barnaamijka Caawinta Guriga iyo Tamarta Dakhliga-hoose (LIHEAP) si wax looga qabto kororka iyo biilasha biyaha. Miisaaniyadu waxay sidoo kale qoto dheereysaa maalgashiga joogtada ah ee gobolka ee “bulshooyinka barroosinka,” dadaallada gobolka ee guuleysta ee laga bilaabay gobollada Pierce, Spokane, Walla Walla iyo Yakima ee lagu bartilmaameedsanayo ka hortagga iyo adeegyada dhalinyarada hoylaaweyaasha ah iyo dhalinyarada. Ganacsigu wuxuu kaloo shaqaaleysiin doonaa koox ka shaqeysa kala-duwanaanshaha midab-kala-sooca milkiilayaasha guryaha si loo aqoonsado loona sameeyo talooyin sharci-dejinta si looga qaado caqabadaha hortaagan milkiilayaasha guryaha.
Horumarinta dhaqaalaha: Ganacsiga Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Tartan waxay maamuli doontaa wareegga shanaad ee Deeqaha gargaarka degdegga ah ee yar yar ee Shaqada Washington. Intaa waxaa dheer, iyada oo loo mahadcelinayo sharciga labada xisbi ee HB 1170, Ganacsiga wuxuu sidoo kale awoodi doonaa inuu qoto-dheereeyo maal-gashiga istiraatiijiyadeed ee dadaallada gobolka ee lagu taageerayo laguna kobcinayo wax-soo-saarka horumarsan, tiir dhexaad u ah u-soo-kabashada dhaqaale ee abuureysa isla markaana adkeysa shaqooyinka wanaagsan ee mushaharka qoysku helo. Ganacsigu wuxuu horumarin doonaa qorshe lagu hirgaliyo $ 138 milyan oo maaliyad federaal ah iyada oo loo marayo Hindisaha Dhibcaha Ganacsiga Yaryar ee Gobolka, waxaanna u wareejin doonnaa shabakadda adkeysiga ganacsiga yar yar ee aan tijaabinnay intii lagu jiray aafada a barnaamij waara, gacan ka geysashada isku xirka ganacsiyada yar yar ee leh adeegyo dhaqan karti iyo sinnaan leh helitaanka fursad.
Cimilada iyo Cadaaladda Deegaanka: Dhamaan wakaaladeena, Ganacsigu wuxuu ka shaqeyn doonaa in lagu daro mabaadi'da cadaalada deegaanka go'aankeena, laga bilaabo horumarinta miisaaniyada ilaa go'aamada maalgelinta. Kuweena Qeybta Tamarta wuxuu gacan ka gaystay hogaaminta shaqada farsamada adag ee ka dambeysa SB 5141. Waxaan u dhaqaaqi doonnaa inaan hirgalino waajibaadkan isbadal doonka ah si loo yareeyo kala duwanaanshaha deegaanka iyo caafimaadka guud ahaan Ganacsiga iyo wakaaladaha kale ee gobolka, iyadoo isla mar ahaantaana la ciyaareyno door cusub oo taageero ah oo lagu wargelinayo hirgelinta laba biiil oo ka dhigaya Washington horudhaca gobollada wax ka qabashada isbeddelka cimilada: Sharciga Ballanqaadka Cimilada iyo Heerka Shidaalka Nadiifka ah. Qeybta Adeegyada Maareynta Kobaca Ganacsiga ayaa ka shaqeyn doonta ku-meel-gaarkaan si loo sameeyo hagitaan si ay dowladaha hoose wax uga qabtaan isbeddelka cimilada iyo adkeysiga qorshayaashooda dhameystiran. Intaa waxaa dheer, ka Sanduuqa Tamarta Nadiifka ah waxay sii wadi doontaa maalgashiga iyo kobcinta hal-abuurka tamarta, oo ay kujirto deeqaha korantada ee gaadiidka.
Adeegyada Bulshada: Gobolka Washington ayaa la yimid $ 15 milyan si loo buuxiyo waxa rajeynaya farqiga kumeelgaarka ah ee maaliyad federaal ah oo loogu talagalay adeegyada dhibbanayaasha dambiga ee ay maamusho Ganacsiga U-doodista Xafiiska Dhibbanayaasha Dembiyada (OCVA). Dabadeed go'aanka Blake, waxaan sidoo kale markii ugu horreysay maamuli doonnaa $ 5 milyan oo deeq-lacageed ah oo loogu talagalay barnaamijyada samafalka ee bixiya adeegyada dib-u-soo-celinta. Cusub Xafiiska Badbaadada Hubka waxay yeelan doontaa maalgelin loogu talagalay deeqaha bulshada. Ganacsigu wuxuu sidoo kale ku dhisi doonaa shaqo horudhac ah Hayada Iskaashatada Carruurta, hirgelinta maalgelin cusub oo loogu talagalay dayactirka xarumaha daryeelka carruurta iyo kor u qaadista iskaashiyada iskaashi ee gobolka ee wax ka qabanaya la'aanta helitaanka tayada, daryeelka carruurta ee la awoodi karo ee dhammaan.
Dawlada Hoose iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha: Guddiga Hawlaha Guud wuxuu u hirgelin doonaa $ 129 milyan oo loogu talagalay kaabayaasha dhaqaale sida deymo dulsaar aad u hooseeya ah oo la filayo in ay dib ugu noqdaan koontada waqti ka dib. Guddigu wuxuu kaloo maamuli doonaa qoondeyn dheeri ah oo federaal ah oo loogu talagalay kaabayaasha dadweynaha. Miisaaniyadda cusub ee raasumaalka ah waxaa sidoo kale ku jira maalgelin qoto dheer oo lagu sameeyo xarumaha bulshada oo ay ka mid yihiin caafimaadka hab dhaqanka iyo waxbarashada hore.
Gaarsiinta sinnaanta: Ganacsigu wuxuu ku howlan yahay wacyigalinta bulshada iyo fadhiyada dhageysiga si loo ogaado caqabadaha ku jira barnaamijyada maalgalinta raasumaalka ee gobolka oo hadda ka hortagaya xaqiijinta mashaariicda ku saleysan bulshada, iyo maamulida $ 5 milyan oo maalgelin raasumaal ah oo si gaar ah wax looga qabanayo caqabadahaas. Waxaan sidoo kale gacan ka geysan doonnaa bixinta maalgelinta iyada oo loo marayo ku dhowaad 50 horudhac oo kale oo gacan ka geysanaya dadaal gaar ah ama riyo u noqoshada xaqiiqda bulshooyinka gobolka oo dhan.
Tani waa uun sahan deg deg ah oo ku saabsan shaqada xiisaha leh ee hor taal hay'adeena. Waxaan ku faraxsanahay shaqada adag, khibrada iyo dadaalka xubnaha kooxdeena Ganacsi, oo dhamaantood kaalin ka qaatay in kalfadhigan guuleysto hadana wey iftin doonaan markaan fulinayno maalgalinta iyo barnaamijyada naloo aaminay. Runtii sharaf bay ii tahay inaan hogaamiyo kooxdan gaarka ah.
guryo la awoodi karosanduuqa tamarta nadiifka ahDeeqaha bulshada iyo amaahdahorumarinta dhaqaalahaHoy la’aankaabayaashaLisa Brownbulshooyinka reer miyiga ahganacsiga yaryarXoojinta bulshadaWasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
← Ganacsiga ayaa abaalmarin $ 234 milyan wareega afraad ee Work WA deeqo ganacsi oo yar yar Hogaamiyaasha gobolada waxay ku boorinayaan wadayaasha inay sii qorsheeyaan markay tahay shidaalka inay sii kordhaan maadaama safarka wadooyinka uu sii kordhayo inta lagu jiro xilliga safarka →